Vaovao - Ny totalin'ny fanondranana an'i Zhejiang New Aluminium Technology CO Ltd amin'ny 2020
Fotoana sarotra ho an'ny tsirairay amin'ny taona 2020 satria ny Covid-19, misy olona very fianakaviana, asa, ary fiainana mihitsy .Sambatra, eto isika ary ny fahasalamana
Misaotra ny ekipan'ny famokarana sy fivarotana matihanina, noho ny fanohanan'ny mpanjifa mahazatra sy ny fahatokisan'ny mpanjifa vaovao, Nahatratra ny firaketana fanondranana vaovao izahay tamin'ny taona 2020 tao anatin'ny fotoan-tsarotra.
Araka ny fanambarana ara-bola dia namokatra 128300 taonina izahay ary nivarotra 123000 taonina erak'izao tontolo izao, isan'izany ny karazana coil aluminium, ravina, foil ary faribolana.
Misy mihoatra ny 40% ny coil aluminium ary 20% ny sheet aluminium. Na dia tena matotra aza ny Covid-19 any Etazonia, dia mbola mitombo hatrany ny fangatahana coil aluminium alohan'ny fandoavam-bola any Etazonia sy Afrika. Izany no rakitsoratra vaovao
Ho an'ny firenena hafa, ny fangatahana foil aluminium ho an'ny tokatrano sy ny famonosana sakafo dia nitombo ihany koa raha oharina tamin'ny taon-dasa, angamba noho ny vokatry ny covid-19, ny ankamaroan'ny sakafo dia mila esorina na fonosana tsara amin'ny alimoola
Manantena izahay fa ny Covid -19 dia azo fongorina haingana ary afaka mitsidika ny mpanjifantsika toy ny mahazatra isan-taona, mifanatrika, miresaka ary mifamihina sy mihomehy, fa tsy amin'ny tsipika.
Mbola hamokatra aluminium avo lenta ihany koa izahay ary hiezaka ny tsara indrindra hanome ny vidiny tsara indrindra ho an'ny mpanjifanay rehetra, na inona na inona kely na habetsany be, raha azontsika atao. Tianay ny mametraka fifandraisana lava sy sambatra amin'ny tombotsoan'ny tsirairay.
Mazava ho azy, raha misy ny olana na lesoka avy aminay, dia atoroy fotsiny, Mba hahafahantsika manatsara azy ary hitombo miaraka amin'ny fanampianao sy ny fanohanananao.
Tonga lafatra ny asa, andao hiara-hiasa bebe kokoa amin'ny 2021